Ngicela nginake ukunakekelwa? Uma uFreddie Murphy esesakhiweni, sicela ufike emnyango wangaphambili. Umkakho uyazi ukuthi ulapha. Phinda, uFreddie Murphy umkakho ulapha. Sicela uphume esakhiweni ... usuqotshwe! (okukhiqiziwe) - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, i-Vjs, i-nightclub 2019
SKU: I-DJ DROPS 70 - #1 Isigaba: DJ Drops